Kulan lagu daah furayo Ururka Horumarinta Soomaalida Itoobiya Laanta North America ayaa habeenimadii Axada ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota - Cakaara News
Kulan lagu daah furayo Ururka Horumarinta Soomaalida Itoobiya Laanta North America ayaa habeenimadii Axada ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota
Minneapolis(CN) Isniin.Jan.19.2015, Kulan lagu daah furayo Ururka Horumarinta Soomaalida Itoobiya Laanta North America ayaa habeenimadii Axada ay bisha Januray 18-ka ahayd ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Kulankan oo ahaa casho sharaf ay soo qaban qaabiyeen maamulka Ururka Horumarinta Soomaalida Itoobiya ee North America ayay xubno ka noqdeen Ururka Horumarinta Soomaalida Itoobiya in ka badan 70 ruux.
Gudoomiyaha Boardiga UHSI laanta North America mudane C/Risaq Xuseen-Cade oo shirka furay ayaa ku soo dhaweeyay ka soo qayb galayaasha kulanka ugana mahad celiyay wakhtigooda ay u soo hureen taageerada Ururka Horumarinta Soomaalida Itoobiya. Madaxa UHSI ee Laanta North America Xusen Cabdiraxmaan ayaa iskan faah faahin dheer ka bixiyay ujeedooyinka ururka loo sameeyay iyo qorshaha laanta North America.
Sidoo kale xubno kamid ah guddiga boarding oo ay kamid yihiin Marwo Faadumo Cali iyo Mudane Axmad Raage ayaa iyaguna dhankooda ugu baaqay Jaaliyada DDSI ee Minnesota inay kaalintooda ka qaataan horumarka deegaanka xubnana ka noqdaan Ururka Horumarinta Soomaalida Itoobiya.
Dhankooda waxaa iyana shirka hadalo ka soo jeediyay gudoomiyaha Jaaliyada St’Cloud Mudane Faarax Xusen Fure, gudoomiyaha SEDYO Mudane C/Waduud Axmad Gaani, gudoomiyaha KB Brothers Mudane Abdiwahab Tabe iyo af-hayeenka DYSE Axmad nur oo dhamaantood ballan qaaday inay xubno kwada noqonayaan Ururka Horumarinta Soomaalida Itoobiya.
Maareeyaha Ururka Horumarinta Soomaalida Itooibya Mudane C/raxmaan Bootaan oo shirka ka hadlay ayaa soo dhaweeyey xubnaha cusub ee ururka isagoo sheegay in Laanta North America laga filayo inay hormuud u noqoto laamaha ESDA ee qurbaha. Sidoo kale ayuu Maareeyuhu sheegay inay hayadani muhiimad gaar ah u leedahay qurba joogta DDSI iyo kaalinta ay ku leeyihiin horumarka nabadgalyada, iyo maamulka suuban ee DDSI ka hana qaaday, sidaasi darteedna ay lagama marmaan tahay inay dhamaantood xubno ka wada noqdaan si deegaanku horumar u gaadho.
Gabagabadii kulanka ayaa halkaasi lagu gudoonsiiyay aqoonsiga Ururka Horumarinta Soomaalida Itoobiya xubnihii ugu horeeya is diiwaan galiyay.